U-Julius Thaddeus "Umkhuleko" oNgcwele 【【Patron of Desperate Imbangela】
USan Judis Tadeo: Impilo nezimangaliso "zommeli wezizathu ezinzima nokuphelelwa yithemba"
Akungabazeki ukwazi ungayibuza kanjani iSan Judis Tadeo okuthile Kubalulekile ukwazi kusengaphambili amanye amaqiniso ngempilo yomuntu osephenduke waba ngomunye wabaphostoli abathandwa kakhulu ebhayibhelini.
Akumangalisi ukuthi umkhuleko emithandazweni yakhe yothando, amacala aphelelwe ngumsebenzi nomsebenzi, uyinduduzo yenani lakhe elandayo labathembekile. Umuntu ofanele, onobulungisa futhi onomusa othululelwe imifula yino.
USan Judas Tadeo akuyena yedwa ongcwele obuzwa ezimweni zokuphelelwa yithemba, baningi abanye. Uma ufuna ukwazi ukuthi kungani lezi zibalo zesonto zithandazwa, ungathola eminye imininingwane.
1 Kwakungubani uSan Julius Tadeo
2 Wawunjani umsebenzi ka- "El Trinomio"
3 Ngabe yiziphi izimangaliso umqashi wezimbangela ezingenakwenzeka
4 Ungathandaza kanjani eSan Juditas
4.1 Umkhuleko ku-Saint Julius Tadeo ngamacala anzima futhi aphelelwe yithemba (umthandazo wama Katolika)
4.2 Ividiyo ngomkhuleko kuSan Judis Tadeo ngesimangaliso esingenakwenzeka:
Kwakungubani uSan Julius Tadeo
Baningi abantu abathandaza kuye kepha bambalwa impela abazi ukuthi ngubani uJudas Tadeo. Ungamangala ukuthi lowo esibhekene naye kwakungomunye wabafundi bakaJesu waseNazaretha ngubani eVangelini wayebizwa ngomfowabo kaJesu, umane uThadede noma uJudas waseSantiago. Lokhu wazalwa endaweni emngceleni phakathi kwe-Asia ne-Europe. Isimo esifanayo seSan Chárbel, ongazi ngayo yonke into ekuyo https://descubrir.online/, San Cipriano, ongakwazi funda kabanzi, futhi ISanta Pancracio.
Njengokungathi onke lawa magama ayembalwa, iSan Jerónimo de Estridón yalibiza ngokuthi “El Trinomio”, okusho ukuthi, “elinamagama amathathu”. Khumbula ukuthi igama elithi Judasi lisho ukuthi "ukudumisa makunikwe uNkulunkulu" nokuthi ubizwa nangegama elithi "San Juditas Tadeo".
Lo msanta wayehlobene noJesu Kristu ngenxa yobudlelwano bakhe neSan Joaquín noSanta Ana, abazali beNtombi Enyulu uMariya. Uyise wabizwa uCleopas nonina uMaria, namesake futhi isihlobo esiseduze sikanina kaJesu. Ngakho-ke, wayengumshana kaJosé noMaría, ngakho-ke, umzala kaJesu Kristu. Omunye wabafowabo kwakunguSanta James the Less.
Umngane kaJesu ngesikhathi sokukhula nobusha bakhe, lapho owokuqala eqala impilo yakhe yasobala, uTadeo, owayebizwa ngaleyo ndlela ukumhlukanisa phakathi noJudas Iskariyothe, yini washiya konke ukuze amlandele.
Njengomqondo wokufuna ukwazi, sifuna ukuveza ukuthi uma uJesu Kristu, ngemuva kwesidlo sakusihlwa sokugcina, ethembisa ukuthi uzozibonakalisa kulabo abamlalele, uJuda waseSantiago wambuza ukuthi kungani engazibonakalisanga kuwo wonke umuntu, njengesibonakaliso sokuzwela okukhulu okuphawuleka ngalolu saint. . U-Kristu waphendula ngokuthi uYise bobabili futhi uzohambela bonke abamthandayo. "Sizofika kuye senze ukuhlala kwethu kuye." (UJuan, 14, 22-23).
Wawunjani umsebenzi ka- "El Trinomio"
Isazi sokufunda ukubekezelela nokubekezela, esasizalwe eKana laseGalile, sawushiya umsebenzi waso Ngena ebuthweni labafundi bakaMesiya, ekubeni engabi munye wabaPhostoli beNgcweti kuphela kepha waba ngumshumayeli omkhulu futhi oshisekela kakhulu wemfundiso yakhe.
Izifunda zaseGalile, iJudiya, iGibithe, i-Asia, i-Ewufrathe, iTigrisi, iSamariya, iLibya, i-Edessa neBabylon, zazingezinye zezindawo lapho uTadeo ayephethe khona umyalezo kaMesiya, nawo owaphelela ezindaweni ezihlangene nePheresiya neSyria.
Ukusakazeka kwalo mlayezo akuyona into ebingachazwa njengokuthula, njengoba idlula ezindaweni ezingase ziveziwe wabhekana nokushushiswa ngonya. Nokho, akukaze kwenzeke ukuba ingcindezi enjalo ikwazi ukumenza ayiyeke imizamo yakhe. Ngaphezu kwalokho, ubuhle bakhe banda futhi, ngenxa yobuhle bakhe, abantu baguqulwa ubuKristu ngamakhulu, kuhlanganise neNkosi u-Ababi yaseBhabhiloni.
Ephelezelwa ngumfowabo uSimoni, wahamba imigwaqo eminingi, wafinyelela ePheresiya, indawo eyayibonakaliswa kabi ngokweqile nezindinganiso zobuKristu. Okungathandeki ukubaluleka kwayo ukuguqula izikhulu eziyizinkulungwane eziyikhulu zaleyo ndawo enobutha, ukushumayela nokulungisa ububi namaphutha abo, ukubabhaphathiza, ukuwaqinisekisa nokuwashada.
Izenzo zabo zabangela ukuthi abakhonza izithombe abenziwe kabusha, bakhungathekile ngokuphelelwa yithemba, ukubaqhubekela phambili ohambweni lwabo lokuya edolobheni elilandelayo, iSuamir, lapho bathatha khona izindlebe zabantu ngezindaba zamanga ngokufika okuzayo abantu ababili bezinye izizwe ababezogwetshwa intambo, ngoba babeqeda ukukhulekelwa konkulunkulu.
Lapho befika bobabili abaPhostoli, bamukelwa ngokukhala okubi, babanjwa futhi baphathwa kabi ngaphandle kwesihe, kwabaholela ethempelini elalilungiselelwe ukukhonza iLanga kanye la Luna. Washiywa endaweni engcwele futhi waboshwa ngamaketanga kwaze kwasa ngakusasa, lapho begwetshwa intambo, kubikwa ukuthi uSimón wabulawa ngesando ekhanda noma wasikwa kabili ngesaha.
Kubonakala sengathi, ngenkathi beshushiswa, uThaddeus wakwazi ukubheka emehlweni kaSimoni ethi "Mfowethu ngibona iNkosi yethu uJesu Kristu isibiza", okubuye kwabangela elinye igagasi lokushaywa kwezidumbu ezivele zinegazi zabaPhostoli.
Kepha wafa kanjani uSan Julius TadeoImpendulo iwukuthi wanqunywa ikhanda ngembazo, yingakho isithombe sakhe kwesinye isikhathi sikhonjiswa nelinye lala mathuluzi ezandleni.
Ngabe yiziphi izimangaliso umqashi wezimbangela ezingenakwenzeka
UThaddeus waziwa nangokuthi "umphathi wezinto ezingenakwenzeka", ngoba uSanta Brígida oyimfihlakalo wabhala ukuthi uJesu wancoma ngelinye ilanga ukuthi noma nini lapho efuna ukuthola umusa othile, kumele awacele ngosanta okukhulunywa ngaye. Ngalesi sizathu yabelana ngale ndlela noSanta Rita de Casia.
Udumo lwakhe njengesimangaliso luyandulela yena, kwaze kwaba seqophelweni lokuyibeka esicongweni sokuthandwa kwabangcwele, kugujwa ngosuku lweSan Judas Tadeo ngo-Okthoba 28. Ukuzinikela kwakhe empilweni kuyamvumela ukuthi azithobe futhi abenothando nabo bonke labo abamncenga ukuthi abanikeze isimangaliso.
Waqanjwa nguJesu uqobo njengo "UMphilisi", Ngokumbona ngesimilo sakhe sobuntu, ubuntu obunothando, futhi uhlala elungele ukuphatha izimbangela ezingenakwenzeka noma ezilahlekile, kusukela lapho uthandazelwe futhi wanikela ngeminikelo.
Sus izimangaliso zokwelapha yabantu abagula kakhulu noma abaxoshwa emhlabeni. Ubuye futhi abe ngumfuziselo kulezo zingozi lapho umuntu kubikwe ukuthi ulahlekile.
Ngokukhethekile, ukuncengela kwakhe kuqinisekisiwe eziqeshini ezahlukahlukene zezokwelapha eziyisimangaliso, ukulungiswa kwaso kumangaze amaqembu ezokwelapha angenelele lapho, engatholi ncazelo yesayensi ngezinzuzo zawo.
Ngokufanayo, uthando luyinjini nokuzola kubantu abaningi abaphila ngenhloso yokuthanda abanye. USanta Jude unjalo umlamuleli ohlukile ekusunguleni isibopho saphezulu phakathi kwezidalwa ezimbili nangaphezulu. Ungaya kuye bobabili ukuze ubuyise uthando olulahlekile emndenini, kwabashadikazi noma ekugcineni uhlangane nalowo muntu obemfuna futhi elula kangako.
Yize kubukeka sengathi le ngcwele ayithathwa njengokubaluleka okufanele ibe nakho ezimweni zothando, ziningi izimangaliso ezenziwa nguye egameni lenhliziyo.
Ungathandaza kanjani eSan Juditas
Indlela eyiyo yokubuza lo ngcwele ngalokho okufiselekayo ngomthandazo. Lowo onamacala anzima futhi ajulile anga sikusize futhi sikuqondise ezikhathini zakho ezinzima kakhulu futhi kuvela esambulweni esasikhonjwe ngaphambili eya eSanta Brígida.
Umkhuleko ku-Saint Julius Tadeo ngamacala anzima futhi aphelelwe yithemba (umthandazo wama Katolika)
"U-Julius Tadeo oNgcwele, umphostoli kanye nomlandeli wamacala anzima nawadikibala,
Ukukhanya kwakho kukhanya futhi kukhanye e-altare,
Ubukhona bakho obumangalisayo nobokomoya,
Ufinyelela izinhliziyo ezihlupheka kakhulu futhi uzinikeze ukuthula,
Awukwenqabeli abakhulekeli bakho ukwenza okuhle noma isicelo,
Inzondo zakho ezingcwele zizwa ukukhala kwethu.
Ngithandazela ubukhona bakho njengamanje,
Namuhla ngizwa ngidangele futhi ngigcwele usizi,
Ngiyacela ukuthi ulalele le kholi,
Inhliziyo yami iyathuthumela futhi ngiyizwe ishaya,
Ubumnyama busibekela umphefumulo wami,
Ubuhlungu bami buyangikhathaza,
Ngilalele ngicela ungilalele
ISt. UJude Thaddeus,
Uhambe noJesu izindlela zobuhlungu,
Waphatha emlonyeni wakho ukushunyayelwa kwezwi lakhe,
Ufundise ukukhanya kokomoya okubuthakathaka,
Ubenze baba namandla
Futhi ngaphandle kokungabaza ubeka zonke izimvu emhlambini,
Ngokuhamba etsheni lesibabule,
Ngamatshe esono kanye nobumnyama obukhulu kakhulu,
Ukuhola ngendlela efanele,
Indlela yasezulwini neyaphezulu.
Ngithethelele phambi kukaNkulunkulu,
Isicelo sami sifinyelela kuye,
Kusukela namuhla ngizimemezela ukuthi ngibe yikholwa lakho elithembekile,
Futhi lapho ngiya khona ngiyokwazisa ukuzinikela kwakho,
Ngizokhuluma ngomusa onginika wona namuhla,
Ukwenza kucace kuwo wonke umuntu,
Ukuthi ukholo lwami kuwe aludumazwanga,
Ngiyakwethemba futhi ngilinde wena
Lomkhuleko uholele ekuqaphelekeni kwe uNovena kuSan Julius Tadeo Ngabazinikele, bekhombisa ukholo lwabo kuye. Ngendlela efanayo, kunemikhuleko ehlukahlukene yeSanta Juditas lapho ukungenela kwakhe kwaphezulu phambi kukaKristu kucelwe, phakathi kwalokhu okulandelayo okulandelayo:
Ukuthandazela umsebenzi. Kokunye okusetshenziswa kakhulu phakathi kwamaKhristu namakholwa, okusetshenziswa yiwo wonke umuntu ophakalela umnotho womndeni wabo
Umkhuleko wothando nokwelashwa. Omunye umthandazo onamandla oqondisa ezimweni ezixakeke kakhulu empilweni noma lapho izingqinamba ezithinta imizwa zithinta amakhanda abucayi.
Ividiyo ngomkhuleko kuSan Judis Tadeo ngesimangaliso esingenakwenzeka:
Ukuhunyushwa kwamakhadi ngokwezikhundla zawo
Ukuhambisana kwe-Aquarius othandweni lwezithandani
Ukuhambisana kweGemini nezinye izimpawu zezinkanyezi
USanta Jerome wase-Estridón, uPatron wabahumushi
U-Saint Mark umvangeli, uPatron wabammeli, ababhali kanye nababhali